I-Vecima ityhila ukuSika-umda ukuhamba komsebenzi ngokuSebenza kunye nesiCwangciso seAgent V3.8 | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-Vecima ityhila ukuSebenzisa ukuSebenzisa ukuSebenzisa ukuSebenza ngokuSebenza ngeV3.8 yesiqulatho
I-Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ityhila ukhuphelo lwayo lwamva lweAgentA yayo enamandla® isisombululo sokuhamba komsebenzi kwi-IBC2019. Inxalenye yokuhanjiswa kweVecima kunye nokuGcina ipotifoliyo yeemveliso, isiQinisekiso somSebenzi sinamandla kwaye kulula ukusebenzisa usetyenziso lwesoftware yokulawula nokuzenzekelayo kokuhamba kweefayile.
Isekwe kwi-1997 ngoqeqesho lweshishini kwiziko leendaba elitsha laseLondon, isisombululo soMxholo ukususela ngoko saba sisixhobo esisehlabathini jikelele, isixhobo esisebenzayo emhlabeni wonke ngamaziko emveliso emva kwexesha, iinkampani zemveliso, abasasazi, amaziko emfundo, kunye neminye imibutho yezorhwebo.
UmxholoAgent unokuzenzekelayo kwimisebenzi eqhelekileyo kwimveliso esekwe kwifayile-enje ngekhadi lokungena ngaphakathi kunye nokudala kokuhanjiswa okuyintloko kokuhanjiswa. Idityaniswa noluhlu olubanzi lwezixhobo zomntu wesithathu ukwenza imisebenzi enje ngefayile esekwe kwi-QC, ukuguqulwa kwenqanaba lesakhelo, ukukhawulezisa ukudluliselwa kwefayile, kunye nokupapashwa kweendaba ezentlalo. Ngokwenza ukuba usasazo kunye nemisebenzi yasemva kwemveliso yenze umlinganiso wokuhamba komsebenzi, ukusuka kwifayile yokungenisa ukuya ngqo-kuMthengi, ukusasaza imveliso ukuya esiphelweni eVecima kubonelela abathengi ngamathuba amnandi, amatsha.
Siyavuya ukwazisa i-ContentAgent V3.8 ye-IBC2019. Linyathelo elibalulekileyo eliya phambili kubathengi bethu abaxabisekileyo kwiindaba, ezemidlalo, ukwenziwa kwemixholo emide kunye nokugcinwa kwezinto ukuze bafumane iindlela ezintsha zokusebenzisa ngaphakathi, ukuhambisa kunye nokuhambisa ukuhamba kwabo, utshilo uMarcus Hume-Humphreys, uMlawuli oPhetheyo kwishishini le-ContentAgent e Vecima. Siyayiqonda indlela ebaluleke ngayo indima yethu kumaxabiso aphezulu kakhulu okuqukuqela komsebenzi, kwaye musa ukuluthatha lula olu xanduva. Ukuqhubeka nokwazisa ukuthanda kwethu. ”
Abathengi abaphambili beqonga leVecimaAAgent iquka NBC, HBO, Sky, BBC, ITV, TF1 kunye neAmazon. Isiqulatho seAgent sisetyenziselwe imicimbi ephambili yezemidlalo kubandakanya iFomula 1, iNdebe yeHlabathi yeFIFA, kunye neMidlalo yeOlimpiki.
UVecima uza kubonisa umxholo weAudioAgent kwi-IBC2019 (Yima 1.F40) kule veki kunye nezinye iipotifoliyo zabo zokuphelisa isiphelo. Ukucwangcisa ixesha lokudibana, cofa Apha.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Iilori zangaphandle ezisasazwayo SJGolden - Imikhonto kunye neentolo yoGcino TVU Networks Injini yeVidiyo ndiphila 2019-09-16
Previous: Ukukhutshwa kweBirdDog i-P4K-Ikhamera ye-4K epheleleyo ye-Bandwidth NDI® PTZ equkethe i-1 ”Sony Sensor
next: I-Vecima Iimpawu eziPhakamileyo zeMarike eziKhokelela kwiMveliso kwi-IBC2019